100L-300L THERMAL OIL HEATING BREWHOUSE 2 VESSELS, 2nd GENERATION, China 100L-300L THERMAL OIL HEATING BREWHOUSE 2 VESSELS, 2nd GENERATION Manufacturers, Vatengesi, Factory - NingBo COFF Machinery Co., ltd
Tichienzanisa neyechinyakare yekupisa bhewhouse, iyo yekugadzira nyowani-tech inopisa mafuta kupisa inodzivirira kupisa kwemhepo uye inopa yakawanda mukana mukuderedza kushandiswa kwesimba mukuita kwekuita, uku uchizadzisa zvakafanana kana zvirinani kubuda.
Chero ani zvake ane chinangwa chekumhanyisa rakabudirira doro rekubika bhizinesi anofanirwa kutarisana nematambudziko akakura. Ndingaite sei kuti ndiise imba yekubikira munzvimbo yakashomeka asi mabasa ese akagoneswa? Ndingaite sei kuti ndigutse vashanyi vangu 'zvinowedzera zvinoda pasina kuwandisa kwesimba kushandiswa? Ndiani anogona kundinunura kubva mukuremerwa kusimudza kwekudzora zvese zvinhu zvekubika? Ndiani anganditsigire neyakanakisa, yechokwadi tekinoroji uye mushure mekutengesa sevhisi?
Bato redu rakazvitsaurira revanyanzvi vehunyanzvi richashanda newe kugadzira mhinduro kwayo kubva mukugadzira, mainjiniya, kugadzira, uye kumisikidza yako wega purojekiti zvido, zvisinei kutanga-kumusoro kana vane ruzivo vapeki. Boka redu rekugadzira rine hunyanzvi uye rinogara richitarisa nzira dzekuita kuti masisitimu edu ashande zvakanyanya, ivo vanokupa iwe mamiriro ekugadzira ekugadzirisa nhanho dzese dzenzira.
● Compact dhizaini uye nyore kuisirwa, inokodzera munhu wega / akazvimirira vabiki
●Hapana bhaira remoto / zvinopisa zvinodiwa
●Hapana condensate mvura
●Thermal mafuta sisitimu inoshanda zvakanyanya.
●Hove yemafuta anopisa inogona kushanda patembiricha dzakakwirira, zvinoreva kuti 25% yakanyanya kupisa kupisa:
●Yakakwirira kudziyisa kunyatsoshanda ichienzaniswa ne steam kudziyisa, simba kuchengetedza;
●Yakakwira mutengo-inoshanda, kuchengetedza mutengo;
●Pasina kudikanwa pombi yemvura yekufambisa kupisa, kuchengetedza mvura;
●Kuchenesa pamwe chete kwemash tun uye ketera, kuchengetedza nguva.